Apple inochengetera muMadrid yakavhurika asi iine zvirambidzo | IPhone nhau
Apple inochengeta muMadrid yakavhurika asi iine zvirambidzo
Iyo Cupertino kambani yakavhura zvakare akati wandei ayo epaMadrid zvitoro maawa mashoma apfuura kuti aendese, shandisa mabasa ekugadzirisa uye zvese izvi nekugadzwa. Zvitoro zveApple muSpain zvaive pakati peyakavhurika uye yakavharwa zvizere. Kwemavhiki, zvitoro zvakawanda pano zvakatora rimwe danho raingobvumidza kupinda kwadzo nekugadzwa, kutora chigadzirwa kana kugadzirisa chishandiso nekugadzwa.
Iyi yakaipa COVID-19 denda rakamanikidza Apple kutora danho uye pakupedzisira zvimwe zvezvitoro muMadrid zvino zvavhurwa zvakare asi nemipimo. Mavari haugone kupinda kuti uone zvigadzirwa sevashandisi veApple nevasiri vashandisi. Muchiitiko ichi, zvitoro zvinongova uye zvakavhurwa zvega zvega kusarudzika. Sekutsanangura kunoita Apple mune yega yega:
Chitoro chakavhurwa kuti chinotora zvigadzirwa zvakatengwa online uye kuti ugamuchire rutsigiro rwehunyanzvi nekugadzwa. Panguva ino, isu hatigone kushandira vanofamba-mukati vatengi. Isu tinotarisira kudzoka kumashandiro akajairwa nekukurumidza sezvazvinogona.
AAngangoita awa imwe chete isu tine iyo Sol, Gran Plaza 2, Parquesur zvitoro uye zvimwe zvakavhurwa nemaakaganhurirwa maawa uye pamberi pekusarudzwa. Izvo zvakakosha kufonera kana kusimbisa maawa ezvitoro pawebhusaiti yeApple kuti tione kana tichigona kupinda kana kwete. Izvo zvakakoshawo kuti zvive pachena kuti zvishoma zvatino famba, nekukurumidza isu tinodzokera ku "zvakajairika" saka chenjera uye pamusoro pezvese kuziva zvatiri panjodzi. Muchidimbu, chinhu chikuru ikozvino kuzvidzikamisa isu pachedu uye ndekwekuti wechipiri wave wecoronavirus inoita kunge yakabata zvakanyanya nyika yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Apple inochengeta muMadrid yakavhurika asi iine zvirambidzo
Vashandi veAmazon vanoba nhare dzemamiriyoni euros
MacPaw inotangisa ClearVPN, nyowani-nyore kushandisa, muchinjika-chikuva VPN